မြေကြီးတပြင် 2.0: Nasa says scientists have found 'closest twin' နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ဟာပြင်ပက - သတင်း Rule
မြေကြီးတပြင် 2.0: နာဆာသိပ္ပံပညာရှင်တွေက '' အနီးကပ်ဆုံးအမွှာတွေ့ပြီကပြောပါတယ်’ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ဟာပြင်ပက
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “မြေကြီးတပြင် 2.0: နာဆာသိပ္ပံပညာရှင်တွေက '' အနီးကပ်ဆုံးအမွှာတွေ့ပြီကပြောပါတယ်’ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ဟာပြင်ပက” New York မှာအလန် Yuhas ကရေးသားခဲ့သည်, သောကြာနေ့ 24 ဇူလိုင်လအပေါ် The Guardian ကသည် 2015 06.42 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
extraterrestrial ဘဝသည်အမဲလိုက်ခြင်းအပေါ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ဟာပြင်ပ "ကမ္ဘာမြေမှအနီးဆုံးအမွှာ" ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီ, နာဆာကြာသပတေးနေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာ.
ထို Kepler အာကာသအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကနေအချက်အလက်များ၏လေးနှစ် '' တန်ဖိုးရှိချွတ်အလုပ်လုပ်, နာဆာကနေသုတေသီများ, ထို Seti Institute မှအများအပြားနှင့်တက္ကသိုလ်များနှင့်အတူသစ်ကို exoplanet ကြေညာခဲ့သည် 12 ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား "လောကဓာတ်" exoplanets နှင့်အခြား 500 စုစုပေါင်းအသစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ.
Related: extraterrestrial ထောက်လှမ်းရေးများအတွက်ရှာဖွေရေး – podcast
အဆိုပါအသစ်ဂြိုဟ်, Kepler 452b အမည်ရှိ, "ကမ္ဘာမြေမှအနီးဆုံးအမွှာဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ကမ္ဘာမြေ 2.0 ကျွန်တော်တို့က "dataset အတွက်ယခုအချိန်အထိတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, ယောဟန်သည် Grunsfeld ကပြောပါတယ်, နာဆာရဲ့မစ်ရှင်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှတွဲဖက်စီမံခန့်ခွဲသူ.
"ဒါဟာဖြစ်နိုင်ခြေကျောက်တောင်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်, တစ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး-type ကိုကြယ်ပွင့်ဝှမ်းလောကဓာတ်ဂြိုဟ်,"ဒါရိုက်တာ Jeff Coughlin ကပြောပါတယ်, တစ် Seti သိပ္ပံပညာရှင်. အားလုံး 11 နေရောင်ထက်သေးငယ်နှင့်အေးဖြစ်ကြောင်းကိုကြယ်တို့သည်ပတ်လည်အလားတူအရွယ်အစားနှင့်ပတ်လမ်းခရီးသွားလာ၏ယခင်ကရှာဖွေတွေ့ရှိ exoplanets.
"ဒါဟာတစ်စုံတစ်ယောက်ကအိမ်မှာမခေါ်စေခြင်းငှါအခြားသောအရပ်ငါတို့သည်သောအရင်းနှီးဆုံးအရာဖြစ်ပါသည်,"Jon Jenkins ကပြောပါတယ်, တစ်နာဆာသိပ္ပံပညာရှင်. အဆိုပါဂြိုဟ်သည်ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ "အဟောင်းတွေကဲ့သို့ဖြစ်၏, ပိုကြီးတဲ့ပထမဦးဆုံးတစ်ဝမ်းကွဲ ", ဟုသူကပြောသည်.
အဆိုပါသုတေသန 452b ကမ္ဘာမြေ၏ငါးကြိမ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရှိပါတယ်အကြံပြု, ခန့် 1.5bn နှစ်ပေါင်းအဟောင်းတွေဖြစ်ပါသည်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်အစွမ်းထက်အကြောင်းဆွဲငင်အားရှိပါတယ်.
အကွောငျး 1,400 အလင်းနှစ်ပေါင်းကွာ, Kepler 452b ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရောင်နဲ့ဆင်တူတဲ့ကြယ်ပွင့် orbits, နှင့် ပတ်သက်. တူညီသောအကွာအဝေးမှာကမ္ဘာမြေနေရောင် orbits အဖြစ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူအရှည်တစ်နှစ်ရှိပြီးအရည်ကိုရေတစ်ဂြိုဟ်ပေါ်တွင်တည်ရှိနိုင်သည့်နေရာကို "လောကဓာတ်ဇုန်" ၌တည်ရှိအဓိပ္ပာယ်.
Jenkins သူတို့ဂြိုဟ်ကျောက်တောင်သည်သံသယကပြောပါတယ်, တက်ကြွသောမီးတောင်နှင့်အတူဖွယ်ရှိ, နှင့်ကမ္ဘာမြေထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်မိုဃ်းတိမ်အဖုံးနဲ့ထူလေထုရှိပါတယ်.
ဒါပေမယ့် 452b ဆို exoplanet သေးရှာဖွေတွေ့ရှိထက်ကမ္ဘာမြေနှင့်အတူဘုံ၌ သာ. ရှိပါတယ်ပေမယ့်, ၎င်း၏ကြယ်ပွင့် 1.5bn နှစ်ပေါင်းအဟောင်းတွေဖြစ်ပါသည်, 4% နောက်ထပ်အကြီးအကျယ်နှင့် 20% ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရောင်ထက်ထွန်းလင်း. ကြယ်တို့သည်သူတို့အရွယ်အစားနှင့်စွမ်းအင်အတွက်ကြီးထွားအသက်အရွယ်, ၎င်းတို့၏ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာတ္ထုမှာပိုပြီးအပူ ချ..
Jenkins သူတို့ကိုလူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ. "သူတို့ကအသေးစားနှင့်မှိန်နေလူငယ်င်လာတဲ့အခါ,"ဟုသူကဆိုသည်, နှင့်ထောင်စုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် "သူတို့ကြီးထွားကြပြီးတောက်ပတဲ့ရ".
အဆိုပါအသစ်ဂြိုဟ် consequently အားလက်ခံတွေ့ဆုံ 10% ကမ္ဘာမြေထက်ပိုပြီးစွမ်းအင်, ကမီးလောင်ရာသို့တစေ့တစောင်းပေးနိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်, ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ပျအနာဂတ်, သိပ္ပံပညာရှင်ကပြောပါတယ်.
"Kepler 452b ကမ္ဘာမြေယခုမှ ပို. ထက်တစ်ဘီလီယံကိုအနှစ်ခံရကြလိမ့်မည်အဘယျသို့ယခုတွေ့ကြုံနိုင်,"Doug ဝဲလ်ကပြောကြားခဲ့သည်, ထို Kepler မစ်ရှင်အပေါ်တစ်ဦး Seti Institute မှသိပ္ပံပညာရှင်.
"Kepler 452b အမှန် ဖြစ်. ကျောက်တောင်ဂြိုဟ်ဖြစ်လျှင်,"ဟုသူကဆိုသည်, ၎င်း၏တည်နေရာက "ကိုယ့်ဟာသူ့ရဲ့ရာသီဥတုသမိုင်းတစ်ဦးမှလွတ်မြောက်ခြင်းဖန်လုံအိမ်အဆင့်ဝင်ရောက်ကြောင်းဆိုလိုနိုင်. ၎င်း၏အိုမင်းနေမျက်နှာပြင်မှာအပူနှင့်မဆိုသမုဒ္ဒရာ evaporating စေခြင်းငှါ. အဆိုပါရေခိုးရေငွေ့အစဉ်အမြဲကမ္ဘာဂြိုဟ်ကနေပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ "
သိပ္ပံပညာရှင်ကိုလည်းတွေ့ရှိ 11 နှစ်ကြိမ်ကမ္ဘာမြေရဲ့အချင်းထက်နည်းနှင့်လောကဓာတ်ဇုန်အတွက် orbiting ဖြစ်အံ့သောငှါအခြားဖြစ်နိုင်ခြေ exoplanets. ခုနစျပါးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး-type ကိုကြယ်နက္ခတ်ပတ်မှပေါ်လာ, Coughlin ကပြောပါတယ်. "သူတို့စမ်းသပ်ချက်ရပ်နေလျှင်အချိန်ကိုပြောပြကြလိမ့်မည်။ "
အဆိုပါတွေ့ရှိမှု "လောကဓာတ်ဂြိုဟ်ထွက်ရှိပါတယ်မည်မျှတယောက်ခြေလှမ်းနီးကပ်လာဥာဏ်ကျွန်တော်တို့ကိုယူ", ယောသပ်သည် Twicken ကပြောပါတယ်, စ Kepler မစ်ရှင်အပေါ်တစ်ဦး Seti သိပ္ပံပညာရှင်.
Coughlin ကိုကက်တလောက်များမှတဆင့် sifting နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် "သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်, ဘဝ hosting များအတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ကြောင်းအေးမြဂြိုဟ် ".
"ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအခြေခံကျကျမေးခွန်းတွေဖြေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်,"Grunsfeld ကပြောပါတယ်. "ကျနော်တို့လူသားတွေအဖြစ်သွားကြသည်အဘယ်မှာရှိ, နှင့်သင်တန်း၏ကယ့်ကိုခမ်းနားမေးခွန်း: ကျနော်တို့စကြာဝဠာထဲမှာတယောက်တည်းသာဖြစ်ကြောင်း?"
ဂြိုလ်သူတို့နှင့်ကမ္ဘာမြေအကြားလွန်အဖြစ် Kepler တယ်လီစကုပ်ကြယ်ပွ၏အရောင်အဝါအတွက်သေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲဖော်ထုတ်မယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောဂြိုလ်တှေ့နိုငျ. အဆိုပါသုတေသီများသည်အခြားနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်, ထိုကဲ့သို့သောအခြား suns ၏အဆိုကိုအတွက်ဆိုင်းရှာနေအဖြစ်, အရာဝတ္ထုတို့၏သဘာဝအတည်ပြုရန်.
၏ 4,661 exoplanet ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ထို Kepler မစ်ရှင်အားဖြင့် cataloged, 1,028 ဖြစ်ပါပြီ အတည်ပြုပြောကြား. သူတို့၏အမျိုးအက Eleven နှစ်ကြိမ်ကမ္ဘာမြေ၏အရွယ်အစားထက်နှင့်၎င်းတို့၏ကြယ်များကိုလောကဓာတ်ဇုန်အတွက် exoplanets လျော့နည်းအတည်ပြုပြောကြားကြသည်. ဝေးသောကြယ်ပွင့် orbiting ပထမဦးဆုံး exoplanet အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ 1995.
ဂြိုလ်သူတို့ရှေ့မှာလွန်အဖြစ် Kepler အာကာသအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကြယ်ပွ၏အရောင်အဝါရှိသည် Periodic dips စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဂြိုလ်သတ်မှတ်ဖေါ်ပြ, လသည်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နေကြတ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်တူညီသောလမ်းအတွက်. သို့သော်, သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဂြိုဟ်အဆင့်အတန်းကိုအတည်ပြုတဲ့အခြားတူရိယာများကလေ့လာတွေ့ရှိချက်လိုအပ်ပါတယ်, ပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်ရှင် suns ၏အဆိုကိုအတွက်အနည်းငယ်ဆိုင်းရှာဖွေနေ.
တွင် 2017 နာဆာကို Kepler မစ်ရှင်မှဆက်ခံဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်, exoplanets များအတွက်နီးစပ်ရာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်များကိုရှာဖွေကြောင်းစစ်တမ်းတစ်ခုဂြိုဟ်တု. Grunsfeld ပိုမိုအစွမ်းထက်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့်ဂြိုဟ်တုနှင့်အတူကပြောသည်, သိပ္ပံပညာရှင်များထားပေးပါ့မယ် "တစ်ဦးကမ္ဘာမြေကဲ့သို့ဂြိုဟ်၏ပထမ primitive မြေပုံများကိုစေ" ရန်နိုင်မည်အကြောင်း, သူတို့သမုဒ္ဒရာများရှိမရှိ "၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပါအဝင်, မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး, ဖြစ်ကောင်းပင်ရာသီ ".
ကိန်းဘရစ်ချ်ပါမောက္ခ Didier Queloz အဖွဲ့သည်ပင်ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ကမ္ဘာမြေနှင့်ဆင်တူကြောင်းဂြိုလ်သည်အကောင်းမြင်ဖြစ်ဖို့သာအကြောင်းပြချက်ကပြောပါတယ်: "ဒါဟာအလွန်ရှည်လျားသောခရီးပဲအစအဦးဖြစ်ပါတယ်။ "
28721	0 အလန် Yuhas, အပိုဒ်, ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု, ပတ်ဝန်းကျင်, အဓိကအပိုင်း, နာဆာ, သတင်း, သိပ္ပံ, အာကာသ, အုပ်ထိန်းသူ, ဗြိတိန်သတင်း
← Sony ရဲ့လာမယ့်ကြီးမားတဲ့အရာကင်မရာကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည် 3D ကိုဦးနှောက်မြေပုံကို Nano-စကေးရှိဆဲလ်များအကြားဆက်သွယ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသ →